ब्लड प्रेसर कंट्रोल गर्न देखी पिम्पल्स हुने समस्याबाट छुटकारा दिलाउन सहयोग गर्छ खजुरले, यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु – Annapurna Daily
On Jun 3, 2021 5,400
एजेन्सी । खजुर स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ । खजुर खाने बानीले शरीरका टक्सिन्सलाई टाढा राख्छ । जसले स्किनको चमक बढाउन मद्दत गर्छ ।यसमा भिटामिन सी हुन्छ ।
जसले स्किन कसिलो गर्न सहयोग पुर्याउँछ र रिंकल्सबाट पनि बचाउँछ । खजुरमा जिंक हुन्छ । नियमित खजुरको प्रयोग गर्दा कपाल कालो र बाक्लो हुन्छ । खजुरमा आइरनको मात्रा पनि हुन्छ । जसले रक्तसञ्चारलाई सन्तुलित गर्ने काम गर्छ । आइरनले कपालको समस्याबाट पनि बचाउँछ ।यसमा भिटामिन बी हुन्छ । जसले पिम्पल्सलगायतका समस्यालाई दूर गर्ने काम गर्छ ।
खजुरबाट पेन्टोथेनिक एसिड पनि पाइन्छ । जसले मृत छालाको सेल्सलाई हटाउने काम गर्छ र अनुहारमा चमक ल्याउँछ । र खानाले ब्लड प्रेसर कंट्रोल गर्न सकिन्छ ।
खजूरमा धेरै मात्रामा भिटामिन र मिनरलका साथसाथै प्रोटीन पनि पाइन्छ । यसका अलावा फाइबरको गुणले पनि खजूरलाई लाभदायक मानिन्छ । मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।खजूरको ड्राई फ्रूटको श्रेणीमा राखिन्छ ।
प्रत्येक दिन बिहान तीन वटा दाना खजूर खादा स्वास्थयका लागि राम्रो हुन्छ । खजूर खानेवित्तिकै तातो पानी खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुस: स्कुसको तरकारी खानु भएको छ, संसारको सबै तरकारी मध्ये सबै भन्दा धेरै शरीरलाई फाइदा गर्ने तरकारी
तरकारी बनाएर खाए हुन्छ, उसिनेर खाए हुन्छ, मःम बनाएर खाए हुन्छ । आफुसँग पाककला भए, अनेकथरी परिकार बनाउन सकिन्छ । स्कुस निकै गुणी तरकारी हो । मानव स्वा’स्थ्यको लागि स्कुस एउटा बहुउपयोगी खानेकुरा हो । स्कुस लौका प्रजातिको एक प्रकारको तरकारी हो ।
स्कुसका तल उल्लेखित फाइदाहरू छन् :- १. पो’षक तत्वको धनी स्कुसको सबैभन्दा ठूलो गुन भनेको यो तरकारी पोषक तत्वले धनी तरकारी हो । किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भि’टामिन, ख’निज, र फा’इबरहरू पाउन सकिन्छ । जुन हाम्रो शरी’रको लागि अत्यावश्यक छ । जस्तै, एउटा २०० ग्रा’मको स्कुसमा निम्नलिखित पोषकतत्व पाइन्छ ।
३. मु’टुको स्वा’स्थ्यका लागि स्कुस धेरै खाने मान्छेमा मु’टुरो’गको जो’खिम कम हुने गर्छ । जस्तै, उच्च र’क्तचाप, उच्च को’लेस्ट्रोल र र’क्तप्रवाहमा पनि यसले सहयोग गर्ने गर्छ । ज’नावर र टेस्ट’ट्युबमा गरिएको अनुसन्धानले र’क्तनलीहरूलाई स्व’स्थ बनाउन मद्दत गरेको भेटिएको छ । यसले र’क्त प्रवाहमा सुधार ल्याउने एवं र’क्तचाप घ’टाउन मद्धत गर्छ । यसबाहेक स्कु’स फा’इबरको राम्रो स्रोत हो ।
२०० ग्राम स्कु’समा शरीरमा चाहिने कुल फा’इबरको १५ प्रतिशत आरडीआई प्राप्त गर्न सकिने बताइन्छ । फाइबर युक्त खाद्य पदार्थको उच्च सेवनले मु’टु रो’गको जोखिम घ’टाएको छ ।
८ मि’र्गाैलाको कामलाई सहज बनाउन फ्याटी लि’भर डि’जिज भनेको एउटा यस्तो स’मस्या हो जसमा अत्यधिक बोसो क’लेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । क’लेजोमा जमेको धेरै बो’सोले यसलाई ठीकसँग काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा क’लेजोमा बो’सो जम्ने कामलाई यसले नि’यन्त्रण गर्न सक्छ । मु’सामा गरिएको अध्ययनले पनि स्कुस खुवाएको मुसामा को’लेस्ट्रोल र फ्या’ट्टी ए’सिडको मात्रा कम पाइएको थियो । तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि स्कुसले मान्छेको क’लेजो स्वा’स्थ्यमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ?
९ स्व’स्थ रूपमा व’जन बढाउन विभिन्न अध्ययनहरूले स्कुस नियमित सेवन गर्नेमा तौल बढ्ने तर यसले मो’टोपनाको कुनै स’मस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ । पछि तौ’ल घ’टाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घ’टाउन सक्ने गरी सन्तुलित रूपमा यसले तौला बढाउन मद्धत गर्छ ।
१०. पा’चन स्वा’स्थ्यलाई सहयोग पुर्याउछ तपाईंको पा’चन प्रणा’लीमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्नको लागि स्कुस आफैँमा सहायक सिद्ध खानेकुरा हो ।